Haiti, U.S.A.: Fahatsiarovana an’i Môpera Jean-Juste · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2009 16:40 GMT
Miraradraraka ny fanehoam-pankasitrahan'ireo vondrona mpitoraka blaogy ho an'i Fr. Gérard Jean-Juste, pretra Haitiana Katolika fantatr'ireo mpakafy azy amin'ny maha-tompondakan'ny mahantra azy sy mpanohana mafana fo ny antoko pôlitika Fanmi Lavalas , tarihan'ilay Filoha voaongana Jean Bertrand Aristide.
“Dada Gerard Jean-Juste“, sarin'i danny.hammontree, ampiasàna ny Creative Commons license. Tsidiho ny tahirin-tsarin'i danny.hammontree ao amin'ny flickr.
Nahasarika ny sain'ny maro i Jean-Juste tamin'ny 2005, tamin'ny nisamborana azy noho ny famonoana an'ilay mpanao gazety Haitiana Jacques Roche, fihetsika izay nolazain'ny mpanohana azy ho manana antony pôlitika – Nokilasian'ilay mpitoraka blaogy Haitiana Wadner Pierre ho “hetsika ivandravandràn'ny famoretana ara-politika” izy io. Taoriana kelin'ny fisamborana azy, ny Amnesty International dia niantso an'i Fr. Jean-Juste ho “gadran'ny fanehoan-kevitra [prisoner of conscience]”; tokony ho enim-bolana taorian'ny nitànana azy , nofoanana ireo vesatra nianjady taminy ary navosotra izy. Nahazo famotsorana vonjimaika tamin'ny governemanta vonjimaika Haitiana koa izy, izay nahafahany nandeha tany Etazonia mba hitsabo tena noho ny aretina ‘leucemie‘ izay hita vao haingana tamin'ny firahana azy.
“Avotsory Dada Gerard Jean-Juste1“, sarin'i danny.hammontree, ampiasàna ny Creative Commons license. Tsidiho ny tahirin-tsarin'i danny.hammontree ao amin'ny flickr.
Tsy ny homamiadana ihany no fahavalo niadian'i Fr. Jean-Juste – na taorian'ny namotsorana ny saziny tamin'ilay resaka vono olona aza, mbola nanohy niatrika vesatra hafa amin'ny fitànana fitaovam-piadiana sy firaisana tsikombakomba koa izy, na dia tsy mbola nisy porofo natao aza mba hanamarinana izany fanamelohana izany. Haiti, Land of Freedom, dia nanamarika tamin'ny vatofotsy (tamim-pifaliana) ilay andro (19 Jona 2008) nanafahana ilay Pretra tamin'ny saziny rehetra:
Niresaka tamin'ny HaitiAnalysis tamin'ny antso an-tariby i Dada Jean Juste tany amin'ny paroasiny any Haiti – ny Fiangonan'i Saint Claire – toerana nisian'ny fanombohana fankalazana manetriketrika tokoa. “Nisaotra an'i Jesoa Tompoko aho” hoy izy. “Nino aho fa tsy hamela ahy izy. Mamela ireo olona nandray anjara tamin'ireo fisamborana roa tsy rariny natao ahy aho, izay mety nahafaty ahy mihitsy. Mety ho maty tany am-ponja aho. Ankehitriny aho afaka manohy manampy ny mahantra.”
Naaton'ny Ambaratongam-pahefan'ny Fiangonana Katolika any Haiti i Jean Juste noho ny fanaovany hetsika pôlitika raha tokony niaro azy izy tamin'ny fotoana nigadrany. Raha nanontaniana momba ilay fampiatoana izy, izay nahatezitra mafy ireo mpanohana azy maro, naneho ny fahatokisany ny amin'ny hahafoana izany i Jean Juste.
“Tsy meloka aho ary hanafoana ny fanapahan-keviny izy ireo mba hamelàna ahy hanatanteraka ny asako eo anivon'ny fiangonana tahaka ny nataon'i Jesoa mandra-pahatongan'ny minitra farany talohan'ny namadihana sy nisamborana azy”.
Pretra maro ao amin'ny paroasy toa an-dry Jean Juste sy Jean Betrand Aristide no mpikambana ao amin'ilay hetsika ti legliz (fiangonana kely). Miavaka izy ity noho izy manohitra ny didy jadona ataon'i Jean Claude Duvalier.
“Jean-Juste any Miami”, sary avy amin'i Robert Miller, ampiasàna ny Creative Commons license. Tsidiho ny tahirin-sarin'i Robert Miller ao amin'ny flickr.
Tamin'ny 27 Mey 2009, afaky ny geja rehetran'izao tontolo izao koa Fr. Gérard Jean-Juste, izay nodimandry teo amin'ny faha-62 taonany. Mbola manohy nyfanehoam-pankasitrahan a sy fanajana azy ireo mpitoraka blaogy: Dying in Haiti dia namerina namoaka ny filazàna manjo navoakan'i The New York Times tamin'ny nahafatesany, ary nahatsiaro ireo zava-tsoa rehetra nataony…
Tsy sasatra niasa ampolo taona maro ho an'ny vahoakan'i Haiti izy.
Nivavaka nangataka ny fanampian'i Md Jude izy nandritra ny lamessa.
Lehilahy mitazona ny teniny no nahafantaranay mivady azy. Nanohy hatramin'ny farany foana izy na kely na lehibe ny olana.
Nahery fo i Dada. Tsy niverina tamin'ny teniny mihitsy izy.
Mandria am-piadanana, ry Dada. Ary rehefa mifanena amin'i Md Jude ianao dia teneno izy tsy hanadino an'i Haiti.
The Haitian Blogger dia namerina namoaka lahatsoratra nosoratan'i Profesora Bell Angelot:
Niara-dàlana hatrany tamin'izay atao hoe mahitsy sy fahamarinana ara-moraly foana i Dada.
Fanahy mahery iray no nandao ity tany ity, ary manamaizina ny tanàna iray manontolo ny fisaonanay. Lasa mandrakizay ny ‘griot’ iray [ilazana ny olona voky andro tany Afrika nahatahiry sy mampita ny fahendrena amin'ireo taranaka aty aoriana] ary Foko iray manontolo no latsa-tomany. Nefa na dia lasa aza ilay mpaminany, ny fahazavàny kosa mbola mitoetra. Nampaneno ny lakolosy’ tao anatin'ny alahelo sy ranomaso ny fiaraha-monin'i Miami, noho ny nandaozan'i Dada Reverend Gérard Jean-Juste ny tany. I Dada Jean-Juste dia iray amin'ireo mpialoha làlan'ny Teolojian'ny fahafahana teo anilan'i Jean Bertrand Aristide tao Haiti, Leonardo Boff tany Nicaragua ary Oscar Romero tany Salvador.
I Dada Jean Juste no mpilanja faneva ho an'ny zon'ny mpifindra monina any Haiti, ho an'ireo tsy manana taratasy, ho an'ireo nisedra ranomasim-be feno antsantsa [sharks – requins] ary ho an'ireo mbola tsy avela hizàka ny Statut fiarovana vonjimaika (TPS). I Dada Jean Juste dia olon'ny fahamarinana, na ny anarany aza dia efa miantso ny fahamarinana.
Farany, Repeating Islands dia mahatsiaro an'i Jean-Juste ho lehilahy izay “nitarika ny ady tsy misy indrafo nanohitra ny fitondràna mitanila’ atao amin'ireo Haitiana eny amin'ny fitsarana, ny haino aman-jery, ny làlana, ary indraindray, any am-ponja”, ary manoritra fa “ireo hetsika rehetra nanaraka ny fahafatesan'i Jean-Juste dia manasongadina ny fitakosenany tamin'ny vahoaka Haitiana.”